Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Abadlali bebhola laseBrazil I-Fabinho Childhood Story Plus
I-LB ibonisa iNdaba yeBhola Genius eyaziwa kakhulu ngesidlaliso "Mr Reliable". Indaba yethu ye-Fabinho Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokunganeka kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi ungumdlali onokwethenjelwa. Noma kunjalo, bambalwa kuphela abheka i-Bio kaFininho ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Fabinho Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Kwangaphambili Nomkhaya
Ukuqala, akukho i-Fabinho kumagama ayinikwe abazali bakhe. Ngakho, igama lakhe eligcwele nguFábio Henrique Tavares. U-Fabinho noma uMnu Reliable uyaziwa ngoSuku lwe-23rd ka-Okthoba 1993 kumama omnyama waseBrazil, uRosangela Tavares (owayengumhlanzi) kanye nobaba omhlophe waseBrazil, uJoão Roberto Tavares (isisebenzi sefektri) eCampinas, eSão Paulo, eBrazil . Ukufanekiswa ngezansi ngabazali bakhe abathandekayo.
UFininho wazalelwa umntwana onamahloni futhi omncane kunabantwana abathathu. Njengomntwana wokugcina womndeni wakwaTavares, uFininho wayegcizelele kakhulu. Wakhula nezingane zakudala edolobheni elihle laseBrazil laseCampinas eliyaziwa ngamasimu alo utshani nezwe eliyingqayizivele elalikuthanda ukudlala ibhola.
KuFininho, into eyodwa yayiqinisekisiwe ngenkathi esemncane. Cishe wonke umfana omncane ngesikhathi sakhe ebuntwaneni wayefisa ukuba ngumdlali webhola. Ngaphezu kwalokho, ukuphela kokuphela kwabo kubandakanya uFininho lapho bekuyibhola khona ngezinyawo.
I-Fabinho Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Qala Umsebenzi
UFininho waqala ukudlala ibhola lokuncintisana esikoleni eneminyaka engu-7. Ngemuva kwesikole, wadlala ibhola neqembu lakhe lendawo yentsha, uPaulíís FC. Ukufanekiswa ngezansi kuFininho osemncane nabalingani bakhe.
UFininho wayeqaphele ukuba abe nokuzimisela okuqotho ngaphambi kwesikhathi. Lokhu kugcizelelwe lapho umqeqeshi wePaulnia u-Erick Martins eveza ukuzinikezela kwakhe, ukuzibophezela kwakhe, ukuqeqeshwa kanye nokunquma kwakhe. Ngisho nabazali bakhe ngokuphawulekayo ubaba wakhe uRoberto uqinisekisa ukuthi, kusukela esemncane, indodana yakhe ibeka phambili kuqala ibhola. Bobabili esikoleni nasebandleni lakhe lendawo yentsha, wonke umuntu wathi unethalente, uhlale ephethe ukukhahlela okuqinile kanye nekhono lomdlali osebenza ngokuzenzekelayo.
Ngokushesha emva kwalokho, uFininho waqala ukuqhuba ibhola le-futsal okwenza kuze kube yilapho eqala iminyaka engu-12 ngaphambi kokucubungula ukuhamba phambili. Isivivinyo sakhe sokuqala sobuchwepheshe sasihambisana nesistimu yentsha kaFluminense.
Uthando lukaFininho webhola lomdlavuza lambona ngemuva kokuvivinywa okuphumelelayo, ubhalise ohlwini lweqembu laseLimpopo elisha laseFluminense, owamnika isiteji ukuze aphinde aveze amakhono akhe.
Enkampanini yentsha, uFininho wahlangana naye Marcelo ngubani owayesehlangothini lomusha osemusha. Phakathi kwamanye amaBrazil kwaba Richarlison owayengumfana wakhe omncane.
Ngemuva kokuchitha iminyaka yakhe yentsha, ukuphakama ngaphezu kwazo zonke izinsizwa ezinkampanini uFininho wabizwa eqenjini lokuqala ngomhla ka-20th ka-May 2012. Ngenxa yokuthi wayemnandi kakhulu, uFininho akazange avele eBrazil ngaphambi kokuya eYurophu ukudlala iRio Ave ePortugal. Ngenxa yakhe yokubiza kwakhe eYurophu, ubaba wakhe wathi;
"Ekugcineni uNkulunkulu wambusisa umzamo wakhe futhi wabeka iqembu elihle lentsha endleleni yakhe. indodana yami inekhono, yasebenza kanzima ukuze iphupho lokuba umdlali webhola futhi uvuna izithelo "
Unina kaFininho uRosângela da Silva Tavares naye ukhumbula ukubiza kwakhe emoyeni eYurophu. Ku-akhawunti yakhe;
"Lapho ezwa ekhuluma noyise ngemuva kokushaya ucingo eYurophu. Ngabona ukuthi kwakuyinto ekhethekile kuye nakumkhaya wakhe. Wajabula kakhulu, wathinta futhi wakhala izinyembezi "
I-Fabinho Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuhlangana noJorgie Mendes
Ngesikhathi edlala neRio Ave ePortugal, uFininho wahlangana ne-agent edlala eqenjini lebhola, UJorge Mendes owaba ngumxhumanisi wakhe nomeluleki wezemisebenzi.
Mendes uyaziwa ukuthi unesibopho sokusiza abadlali abaningi abakhuluma isiPutukezi abathanda C Ronaldo, Jose Mourinho njll yenza inqubekela phambili kumaqembu amakhulu kakhulu.
Isinqumo se-Smart Agent: Naphezu kokuba ngumdlali ophezulu, uFininho wanikezwa iseluleko esivela ku-Real Madrid Castilla (i-Real Madrid ithimba B) elibheke ukuthi lizokwenza ngcono umsebenzi wakhe. Okubaluleke nakakhulu, wabhekene neklayenti lakhe uJoseph Mourinho ophethe i-Real Madrid, ecabanga ukuthi uzosiza uFininho ukuba afakwe eqenjini eliphezulu laseMadrid.
UFininho walalela UJorge Mendes'ufisa ukujoyina iqembu lezokuthuthukiswa kweCastilla. Wavusa ngaphezu kwamaqembu amancane aseMadrid futhi wangena eqenjini lokuqala lokuqala laseMadrid lapho ehleleka khona ngoba Jose Mourinho sithole leso sikhathi.
Ukubukeka kukaFininho kuphela ku-Real Madrid kwahlasela uMalaga ngesikhathi ehlinzeka Angel Di Maria njengoba kusiza okuholela emgomweni wokuwina umdlalo. UJoseph Mourinho owayeseceleni kokukhishwa akazange amnike uFininho ithuba elifunayo. Ukwazi iklayenti lakhe uJoseph Mourinho uzoshiya iqembu laseSpain UJorge Mendes bavumelana nesinqumo sokubolekwa imali eMonaco esabe sesenza isivumelwano esihlala njalo.
E-Monaco, Fabinho wayenqume ngokuqinile ukwenza amaphupho akhe agcwaliseke futhi izifiso zakhe ukuba zibe ngcono kakhulu esikhundleni sakhe kwakungeyona into edlula. Eqembu, yena wazinikela emdlalweni omuhle ovikelekile owabona amakilabhu phakathi U-Mourinho U-Manchester United ulwela ukuthenga kwakhe. Wenqaba Mourinho's United futhi waya eLiverpool. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
I-Fabinho Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Ngaphansi kwebhola laseBrazil eliphumelelayo, kukhona owesifazane omkhulu, noma kunjalo isisho siya. Ngemuva kwe-Fabinho, kuye kwaba intombi enhle kakhulu okwamanje engumkakhe. URebeca Tavares, okufanekiselwa uthando lokuphila kwakhe ngezansi ngumkaFininho.
U-Fabinho nomkakhe uRebeca Tavares owake waba mnandi. URebeca washada noFininho ku-2015 ngemuva kokuhlangana ndawonye ku-2013. Bobabili abathandi bayakujabulela ukuveza uthando lwabo futhi bathole isikhathi sokuchitha ndawonye.
Njengoba kubonwe kubangane abasondelene nemithombo yomndeni, ubuhlobo babo babathatha kubahlobo abangcono kakhulu othandweni lweqiniso.
U-Fabinho ubheka njengelungelo ukuthatha owesifazane wakhe noma yikuphi lapho efuna ukuya khona esitolo. Ku-Fabinho, ukuthenga kuyothenga nje. Wakhe "Siyahamba sithenga sishiya" indlela yokuphila yezitolo akuyona into nge Rebeca. KuRebeca, kunesitolo noma ezimbili ezisho okuthile kuye
Ngokombiko wakhe we-Instagram, uRebbeca uhola ukuphila okuthakazelisayo noFininho. Uyakuthanda ukuthumela amahlumela amaningi kusuka emaholide angaphandle kanye nendoda yakhe. Lokhu kungokwokuNew York.
U-Rebeca u-brunette omuhle uthanda imfashini futhi u-Alicia Keys uyisithombe sakhe. Uthanda indoda yakhe imyisa endaweni enezakhiwo ezinhle ezakhiwe ngezithombe njengoba kuboniswe esithombeni esingezansi.
Ukuchitha amaholide ogwadule lwase-Arabia kunendawo encane ekhethekile enhliziyweni yakhe ngenxa yobungako bawo nobuhle bemvelo. Ugwadule ugcwele imisebenzi ehlukahlukene kubo bonke abathandi abathanda ukuzijabulisa.
Usuku luka-Valentine lungaphezu nje kokugubha imibhangqwana ethanda ukubonisa ukuthi bayathandana kangakanani.
I-Fabinho Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -I-Media Media Ignorance
Ngesikhathi sokubhala, ikhasi le-Twitter le-Liverpool linabalandeli abangu-10.4 million. Cishe wonke umdlali weLiverpool usebenzela i-akhawunti yakhe ye-Twitter ngokwabo ngaphandle kwe-Fabinho. Umkakhe uRebeca Tavares useke wathi uzothatha izindlela eziningi zokuxhumana nezikhulu zamaFiverpool ku-Twitter abathanda ukuxhumana nabaseBrazil.
Wabuye waya emphakathini ukuze achaze ukungazi komphakathi womyeni wakhe ku-akhawunti yakhe. Emagama akhe; ...
"Futhi yebo, lena yi-Twitter yami. U-Fabinho akangilandeli okwamanje ngoba engazi ukuthi i-Twitter isebenza kanjani ngakho unomuntu osizayo ngalokho futhi mhlawumbe lowo muntu akazi ukuthi ngingumkakhe. "
Thola i-ngezansi ngezansi;
U-Fabinho njengesikhathi sokubhala njengamanje unabalandeli abangu-94.4k abangaboni i-tweet ngokwakhe. Ngokusho kweBrazil ...
"Nginabo [i-twitter] ababili noma abathathu edlule kodwa ngiyisebenzise kuphela ukubona ama-hashtag noma izindaba. kodwa ngicabanga ukuthi i-Twitter ingcono kune-Instagram ngokuphathelene nokuxhumana nabalandeli. Ngomuntu siqu, ngithanda i-Instagram. "
I-Fabinho Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
UFininho uvela emlandweni wothando lomndeni webhola. Okwamanje eNgilandi, uFininho uhlala nodadewabo nomkhwekazi wakhe abanakekela izindaba zakhe zebhola. Iphupho lakhe liwukuthi wonke umndeni wakhe usondele. Nokho, abazali bakhe; UJoão Roberto (ubaba) noRosângela (umama) bathanda ukuhlala eCampinas, eBrazil.
"Ngizikhululekile kakhulu ukuthi indodakazi yami ikhona naye. Siya njalo ngonyaka futhi sihlala naye cishe izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba sibuyele eBrazil. "
Lapho abazali bakaFininho beza bevakashele, ikhaya lakhe liyajabula futhi lijabule. UFininho uthanda ukudla i-Meat Lasagna elungiselelwe ngokukhethekile ngomama wakhe.
Lapho efika eNgilandi, uRosângela njalo uthatha ukudla okuningi eBrazil futhi akayeki ukulungisa irayisi, ubhontshisi kanye ne-steak yakhe yokuzalwa kwengane kanye nomnakekeli womndeni weTavares.
I-Fabinho Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts -Ummeli uBobby
Roberto Firmino uye wathola isidlaliso 'Ummeli uBobby'ekutholeni imizamo yakhe ecashile ekukhokiseni ukudluliselwa komuntu wakhe waseBrazil uFininho waseMonaco waya eLiverpool. Ngokuvumelana ne Firmino, ...
"UFininho wakhuluma nami lapho sidlala eqenjini likazwelonke. Kamuva, ube nengxoxo enhle nami mayelana neLiverpool futhi ngokushesha, ngacindezela izinkinobho "
Firmino unesibopho sokuchazela uFininho, indlela yokuphila e-Liverpool, izindawo ezinhle kakhulu zokuhlala kuzo, indlela iqembu elisebenza ngayo, ukuthi abantu bakuleyo ndawo bahlala kanjani. Okubaluleke kakhulu, wasiza uFininho ukuthi athole kanjani indlu yokuthenga. Kwabalandeli abaningi, Firmino nguJorgie Mendes olandelayo.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda indaba yethu ye-Fabinho Childhood kanye namaqiniso angabonakali we-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.
U-Dani Alves Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts